भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा मेडिकल डाइरेक्टर नियुक्त – indepth.com.np
८ मंसिर २०७६, आईतवार २१:०२
वरिष्ठ डा. दीपेश धिताललाई भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालको निमित्त मेडिकल डाइरेक्टरको नियुक्तिपत्र दिँदै व्यवस्थापन समितिका कार्यबाहक अध्यक्ष महेश श्रेष्ठ । तस्बिरहरु : इन डेप्थ
भक्तपुर । भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालको मेडिकल डाइरेक्टरमा अस्पतालका वरिष्ठत्तम चिकित्सक डा. दीपेश धिताल नियुक्त भएका छन् ।
अस्पताल व्यवस्थापन समितिले डा. धिताललाई निमित्त मेडिकल डाइरेक्टर नियुक्तिसँगै वरिष्ठताकै आधारमा डा. अजय झा र डा. उत्सवमान श्रेष्ठलाई नायब मेडिकल डाइरेक्टर नियुक्त गरेको हो ।
अस्पतालमा आइतबार एक कार्यक्रमबीच निमित्त मेडिकल डाइरेक्टर डा. धितालसँगै नायब मेडिकल डाइरेक्टरद्वय डा. झा र डा. श्रेष्ठलाई नियुक्तपत्र दिइएको छ । अस्पताल व्यवस्थापन समितिका कार्यबाहक अध्यक्ष महेश श्रेष्ठले उनीहरुलाई नियुक्तिपत्र दिएका हुन् ।
प्रो.डा. ऋषिकेशनारायण श्रेष्ठको पदावधि सिद्धिएपछि गएको असोज २४ गतेदेखि अस्पताल मेडिकल डाइरेक्टरविहीन थियो । त्यसमाथि प्रो.डा. श्रेष्ठ र अस्पतालका केही कर्मचारीहरुको उक्साहटमा भक्तपुर नपाले हस्तक्षेप गरेपछि अन्योलमा रहेका अस्पतालले आइतबार नयाँ मेडिकल डाइरेक्टर पाएको छ ।
डा. अजय झा
डा. उत्सवमान श्रेष्ठ
अस्पतालका वरिष्ठ कर्मचारीहरुले भक्तपुर नपालाई अप्रत्यक्ष सहयोग गरेपछि आइतबार नै व्यवस्थापन समितिले बाहिरबाट ल्याएर प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्त गरेको छ ।
समितिले भक्तपुरकै रुपेश शिलाकारलाई सीईओ नियुक्त गरेको हो । त्यस्तै समितिले अस्पतालमा कार्यरत सम्पूर्ण मेडिकल अफिसरहरु सबैलाई समान सातौं तहअन्तर्गत सबैभन्दा बढी तलबमान दिने निर्णय गरेको कार्यवाहक अध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
उनले समितिले निलम्बन गरेका मेडिकल डाइरेक्टर प्रो.डा. ऋषिकेशनारायण श्रेष्ठले भक्तपुर नपा र केही कर्मचारीहरुको बलमा अस्पतालमा कब्जाजस्तै गरेपछि आइतबार नयाँ मेडिकल डाइेक्टर नियुक्ति गरिएको जानकारी दिए ।
नवनियुक्त निमित्त मेडिकल डाइरेक्टर डा. धितालले अस्पताल अन्योलको स्थितिमा रहेकाले अस्पतालको विधि र चिकित्सकहरुको सल्लाहअनुसार वरिष्ठताको आधारमा आफूले जिम्मेवारी स्वीकार गरेको जानकारी दिए ।
एक पक्षका कर्मचारीहरुको विरोध भए पनि अन्योलको अवस्थामा सबै पक्षलाई मिलाएर अस्पतालको भविष्य सुनिश्चित गर्न आफूले चुनौती स्वीकार गरेको उनको भनाइ थियो ।
त्यस्तै नायब मेडिकल डाइरेक्टर डा. श्रेष्ठले अस्पताललाई निकास दिन नै आफूहरु पदीय जिम्मेवारीमा आएको बताए ।
उनले सबै पक्षसँग समन्वय र सहकार्य गरेर अघि बढ्न नै आफूहरु अगाडि आएको प्रतिक्रिया दिए ।
अस्पताल व्यवस्थापन समितिले नयाँ मेडिकल डाइरेक्टर तथा सीईओ नियुक्त गरेपछि आइतबार नै अस्पतालमा केही समय तनाव उत्पन्न भएको थियो । निलम्बित मेडिकल डाइरेक्टर प्रो.डा. ऋषिकेशनारायण श्रेष्ठ, अस्पताल कर्मचारी कल्याण समितिका अध्यक्ष शिवराम धुख्वालगायत भक्तपुर नपा व्यवस्थापन पक्षीय कर्मचारीहरुले नयाँ नियुक्ति नमान्ने भन्दै नाराबाजी गरेका थिए ।
उनीहरुले अस्पताल व्यवस्थापन समितिको माइन्यूटसमेत कब्जामा लिएको कार्यबाहक अध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
उक्त क्रममा दुईपक्षबीच हात हालाहाल र धकेलाधकेल भएको थियो ।
अस्पतालमा भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाउँदै भक्तपुर नपाले गएको साउन ३० गते बोर्ड बैठकको निर्णय भन्दै अस्पतालको मौजुदा व्यवस्थापन समितिको समानान्तर हुने गरी नगर प्रमुख सुनिल प्रजापतिको अध्यक्षतामा अर्को व्यवस्थापन समिति गठन गरेको थियो ।
भक्तपुर नपाले हस्तक्षेप गरेपछि अस्पतालको मौजुदा व्यवस्थापन समितिले सर्वोच्चमा रित हालेको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले गएको भाद्र १० गते भक्तपुर नपाको हस्तक्षेप अवैधानिक भन्दै मौजुदा व्यवस्थापन समितिलाई नै विनाअवरोध काम गर्न र गराउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
उक्त आदेशपछि परेको पेसीको भने अझैसम्म टुंगो लागेको छैन । पेसी सर्दै सर्दै जाँदा यता अस्पतालमा अन्योल बढेको बढेयै भएपछि आइतबार मेडिकल डाइरेक्टर नियुक्त गरिएको व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ ।
अन्ततः मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन